Ngathi | I-Hebei Ximai Oomatshini beNtengiso yezixhobo zeComputer, Ltd.
Impompo eziphathekayo zilahla Ingqiniba
Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yophuhliso, umatshini we-Hebei Ximai ukhule waya kumenzi wempompo osebenzayo. Iimveliso zethu zigubungela iindidi ezi-4, ngaphezulu kwamacandelwana angama-30 kunye namawaka ezinto ezizodwa. Idolophu enkulu ebhalisiweyo yeXimai ingama-75 ezigidi ze-yuan, igubungela ummandla we-94, i-600 yeemitha zesikwere, kwaye ngoku iqeshe ngaphezulu kwama-350, kubandakanya iinjineli eziphezulu ezili-13, i-27 R & D / ukuqinisekiswa komgangatho / abasebenzi bezobuchwephesha, ngaphezulu kwe-240 yabasebenzi bemveliso, nangaphezulu Ngama-60 abasebenzi benkonzo
I-Ximai ineeworkshops ezili-13 zokuvelisa, kubandakanya ukusika umasifundisane, i-CNC yokufundisa ngomatshini, i-Derusting workshop, i-workshop ye-Welding, i-Painting workshop. Umzi-mveliso wethu unezixhobo ezininzi zobuchwephesha, ezinje ngezixhobo zonyango oluphezulu zokuhambisa ubushushu, izixhobo ezizenzekelayo zokuwelda ubushushu, umatshini wokubamba, umatshini wokugaya we-CNC njalo njalo. Sinako ukuvelisa imibhobho impompo eziphathekayo, izixhobo kunye nezixhobo abangabancedani PM, SCHWING, CIFA, JUNJIN, SANY, Zoomlion, Foton, kunye nabanye
Ukusukela ngo-1995, iimveliso zika-Hebei Ximai's ziye zathengiswa kumazwe angaphezu kwama-80 nakwimimandla yehlabathi. Ukubambelela kumgaqo "wokuqala wabathengi" kunye "nohlobo lokuqala", u-Hebei Ximai wenza inkqubo epheleleyo yenkonzo yabathengi. Ngomgangatho olungileyo, ixabiso elifanelekileyo, indlela yokubhatala eguqukayo, ukuhanjiswa ngexesha kunye nenkonzo yabathengi egqibeleleyo, u-Hebei Ximai ufumana igama elihle phakathi kwabathengi.
Ukuba u ...
1. Ngaba ujonge abavelisi be-OEM / ODM kolu shishino.
2. Ufuna umntu onokuvelisa into oyifunayo kwaye uyilo lwesiko oluprintiweyo kwinkcazo yakho.
Ke inkonzo yethu ye-OEM / ODM yeyakho!
1. Ufuna ukuthenga iodolo yesampulu kuqala.
2. Thenga iodolo epheleleyo emva kokuqinisekisa umgangatho wemveliso.
Ke inkonzo yethu yeSampula yoku-oda yeyakho!
1.Ungathanda ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga nenkampani yethu.
2. Ndingathanda ukutyelela i-China kwaye ndinomdla wokusebenza nathi.
Ke inkonzo yethu yoKhenketho lweFektri yeyakho!